Ahoana ny fomba hampiasana ny TV Tubi - Tubi.tv/Activate (fisoratana anarana) - Fialam-Boly
Ny fampiharana streaming dia ao anaty ady tsy tapaka hanomezana ny atiny tsara indrindra sy ny traikefan'ny mpampiasa. Na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia manana serivisy misaraka izay tsy maka tahaka ny fahitalavitra tena izy. Mihena tsikelikely ny Cable TV, saingy misy orinasa sasany mbola miasa amin'ny fanomezana anao traikefa amin'ny fahitalavitra.
Mba hitondrana ny fahitalavitra amin'ny fitaovanao marani-tsaina, Tubi TV dia iray amin'ireo sehatra miavaka. Raha tsy misy famandrihana dia afaka mandefa fandaharana amin'ny fahitalavitra sy sary mihetsika tsy tambo isaina ianao. Mbola mahazo doka toa ny fahitalavitra ihany ianao. Na izany aza, manana fifehezana feno amin'ny atiny alefanao ianao. Ergo, tsy misy fe-potoana voafetra amin'ny fandefasana votoaty.
Ny tena zava-dehibe dia maimaim-poana daholo! Ka ahoana no ahafahanao mampiasa Tubi TV? Dingana mahitsy izany! Andeha hojerentsika hoe inona ny Tubi TV ary ny fomba fampiasanao azy amin'ny traikefa tsara indrindra:
Inona ny TV Tubi?
Tubi TV dia rindrambaiko iray avy amin'ny Fox izay mitondra anao ny maha-azo itokiana sy fialamboly amin'ny fahitalavitra tariby amin'ny telefaoninao. Inona no dikan'izany? Raha miasa amin'ny famoahana fampiharana izay mahatsapa tena ho ‘fampiharana’ ny tubi hafa, ny Tubi TV kosa dia mahatsapa ho toy ny fahitalavitra amin'ny telefaonao.
Ny mpamatsy hafa dia miasa amin'ny fanomezana atiny miaraka amin'ny sarany famandrihana. Raha miaraka izany dia mety hiteraka fandaniana be izany. Na izany aza, ny TubiTV dia ivon-toerana tokana misy fanangonana fandaharana amin'ny fahitalavitra sy horonantsary. Ny vaovao tsara indrindra? Ny atiny rehetra dia maimaim-poana.
Inona no atolotry ny Tubi TV?
Tubi dia manana interface mora ampiasaina izay amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fampiharana na mankany amin'ny Tubitv.com, azonao atao ny manindry ny 'manomboka mijery' ary manomboka mivantana ny fampiharana avy hatrany. Misy fanangonana sarimihetsika 20 000 sy andianà fahitalavitra mihoatra ny 20 000 azonao alefa maimaimpoana. Tsy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika ihany no ahazoanao miditra amin'ny sary mihetsika malaza.
Niara-niasa tamin'ny orinasa mpamokatra laza malaza marobe toa ny Paramount, MGM, Warner Bros, ary Lionsgate izy io mba hanomezana anao votoaty voalohany sy premium maimaim-poana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe: amin'ny fomba ahoana no hitondrany anao maimaimpoana an'ity atiny ity?
Doka amin'ny Tubi TV - Misy famandrihana ve?
Mba hitondrana votoaty anao maimaimpoana dia mandefa dokambarotra ny Tubi TV. Izany no fiarahan'izy ireo miasa amin'ny mpamatsy hafa ary mandoa vola amin'ny fanomezana ny atiny. Noho izany, ny Tubi TV dia sehatra ara-dalàna izay azonao sintonina amin'ny fitaovana rehetra ary alefanao tsy misy ahiahy ara-dalàna.
Mampalahelo fa hitazona maimaimpoana tanteraka ny atiny ary tsy ho lasa orinasa mitady tombom-barotra, dia tsy manome famandrihana i Tubi. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy fonosana isam-bolana na isan-taona azonao vidiana amin'i Tubi. Noho izany dia tsy azonao atao ny mamono ny doka.
Raha fintinina, ny dokam-barotra no mitazona ny atiny tsy andoavam-bola.
Mampifanaraka ny Tubi TV:
Tubi dia hita amin'ny sehatra rehetra. Azonao ampiasaina amin'ny telefaona finday sy tablette izany. Izy io dia manohana Android, iOS, ary Roku. Azonao atao ny mandefa ny atiny amin'ny PC na amin'ny fitaovana hafa. Ankoatr'izay, ny fahita lavitra ataonao dia miasa miaraka amin'ny fampiharana ihany koa. Tsy izay ihany! Raha manana console lalao ianao dia azonao ampiasaina ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, Tubi dia mifanentana amin'ny rehetra ary mitondra anao hanamora ny fampidinana. Hita amin'ny fivarotana an-tserasera rehetra manjifa toy ny Google Playstore, Apple Store, ary Samsung Store. Raha tsy izany dia azonao atao ny mitsidika ny tranonkala ofisialy handefasana azy. Toy izany koa, mandeha tsara amin'ny tranokalanao izy nefa tsy mandray fitaovana.
Ahoana ny fampiasana TV Tubi?
Raha hampiasa Tubi TV dia afaka mitsidika ianao https://tubitv.com/ na misintoma ny fampiharana avy amin'ny magazay an-tserasera ofisialy. Ity misy torolàlana manaraka:
Sokafy ny fampiharana na tranokala amin'ny browser
Tsindrio ny 'manomboka mijery', ary hitondra anao any amin'ny tranomboky izany
Any ianao dia manana safidy mivezivezy, mikaroka, misoratra anarana ary miditra
Azonao atao ny mandefa atiny tsy misoratra anarana amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny sary kely ao amin'ny andian-tsarimihetsika na ny sarimihetsika satria ho feno izy io
Ny interface dia manome anao safidy amin'ny Chromecast ilay mpilalao amin'ny fahitalavitra ary mijery ao.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny dikanteny sy ny kalitaon'ny horonantsary. Misy atiny HD maimaim-poana.
Raha mila serivisy manokana ianao, dia ny fisoratana anarana no safidy tsara indrindra.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny Tubi TV?
Mora ny misoratra anarana amin'ny Tubi TV. Araho ireto dingana tsotra ireto:
Misy safidy fisoratana anarana eo amin'ny zoro ambony ankavanan'ny fampiharana. Tsindrio eo.
Azonao atao ny mampiasa Google na Facebook hisoratra anarana sy miditra ho azy
Raha tsy izany, azonao atao ny mameno ny antsipiriany sy misoratra anarana amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fampianarana
Raha vao mameno ny fampahalalana sy misoratra anarana ianao dia ho lasa mpikambana voasoratra anarana
Avy eo ianao dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny fampiasana mailaka sy teny miafina
Dingana tokony hampiasana ny tubi tv amin'ny fitaovanao:
Tsy voatery hiditra ianao raha te hampandeha ny Tubi TV amin'ny fitaovanao. Na izany aza, raha te handefa ny Tubi TV amin'ny fahitalavitra ianao dia afaka manaraka ny fampahavitrihana dingana roa.
Sintomy ny fampiharana Tubi TV amin'ny fahitalavitrao
Sokafy ny fampiharana ary kitiho ny trano
Avy ao an-trano, kitiho ny Sign in
Ny fampiharana amin'ny fahitalavitra dia haneho kaody fampahavitrihana
Soraty tsara ny kaody fampandehanana
Tubi TV dia hihetsika tsy misy olana
Viola! Vitao amin'ny fizotran'ny Login. Afaka mivezivezy amin'ny fahitalavitrao ianao izao tsy misy olana.
Ny atiny azo jerena ao amin'ny Tubi TV dia tena izy ary novokarina tamin'ny asany. Misy mpampiasa mihoatra ny 25 tapitrisa eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fanohanana amin'ny fitaovana maherin'ny 25 sy ny fahaizan'ny duplication kely indrindra, manana sehatra fialamboly feno ianao araka izay anananao.
Raha tsy te handany vola be amin'ny famandrihana maro na TV tariby ianao dia afaka mampiasa fampiharana Tubi TV. Na izany aza, tsy manome anao ny atiny farany ity. Ny ankamaroan'ny atiny dia natao ho an'ny fialamboly tany am-boalohany. Satria manana ny fampiharana azy ireo mpamatsy tolotra hafa, tsy maintsy tsy maintsy misoratra anarana amin'izy ireo ianao mba hidiranao amin'ireo andiany sy sarimihetsika farany.
Amin'ny hazakazaka fampiharana streaming an-tserasera, tubi TV mijoro amin'ny akany manokana. Tsy dia misy fampiharana toa azy. Noho izany, mety ho fanampiny sarobidy amin'ny fanangonana anao izany. Miaraka amin'ny interface minimalist sy ny fomba mahitsy, izy io koa dia fanampiny tsara ho an'ny olona tsy dia mahay teknolojia.
ny fomba hijerena ny faritra mihidy amin'ny faritra
hoditra minecraft ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra
ny fomba filalaovana lalao mahatsiravina
mijery andiany maimaim-poana amin'ny fizarana feno
ny fomba fampidinana sarimihetsika avy amin'ny fmovies amin'ny pc
jereo ny tambajotra sosialy